भोजराजका एक जोर महंगा जुत्ता
मुख्य पृष्ठ » कृती / समीक्षा » भोजराजका एक जोर महंगा जुत्ता
भोजराजका एक जोर महंगा जुत्ता
२२ मार्च, २०१५ लेखक : निष्प्रभ सजी
नाम : निष्प्रभ सजी
ठेगाना : हेमजा, कास्की (हाल सिड्नी अष्ट्रेलिया
ईमेल : nisprabhsaji@gmail.com
निष्प्रभ सजी का रचनाहरू
पोखरामा करिब एकदशक अगाडि पोखरेली युवा साँष्किृतिक परिवारको संयोजकत्वमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध साहित्यिक गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । जसमा एउटा कविको रुपममा म पनि छानिएको थिएँ । हामीले पोखरामा रहेका बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको अवलोकन गरि भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित पार्ने गरि कार्यलयस्थलमै बसेर कविताको रचना गर्ने र बेलुका कास्की जिल्ला बिकास समितिको सभाकक्षमा सरकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूकै उपस्थितिमा तिनै कविताहरू वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका थियौँ ।
त्यतीनै बेला मसँग कास्कीको कर कार्यालयमा कविता लेख्ने जिम्मेवारी लिएर गएका थिए भोजराज न्यौपाने । हाम्रो भेट कविताका कारणले भएको थियो, अहिले पनि म उनीसँग उनकै कविता कृती ‘छुटेको जुत्ता’का कारण दशक पहिलेको समयलाई पोखराझैँ प्रियमानेर सुम्सुमाइरहेको छु । अलि पहिले यसकविताका संग्रहका केही प्रति सिड्नीमा कविकै आफन्तको हातबाट पाएको थिएँ । आवरण आर्कषक मानेँ र लक्ष्मी नाङ्खुसीले खिचेको कविको तस्बिर झनै लोभलाग्दो । कवि भोजराजको फोटोमा पनि एकजोर छालाका जुत्ता टलक्क टल्केका थिए । सोचेँ कवि श्यामल ले झैँ ‘हतारमा यात्रा’ गर्दा कवि भोजराजका जुत्ता साँच्चै कतै छुटेकै हुन् भने एकजोर महंगा जुत्ता छुटेछन् । तर थाहा छैन उनको बिम्ब कुन जुत्तामा र कसको जुत्तामा छरिएको छ ।
पहिलो पृष्ठ पल्टाउन नपाउँदै कवि श्यामलकै भूमिका देखेँ, जिज्ञाशा झनै बढ्यो । कविको समिक्षा कहिले कविता नलेखेको समिक्षकले गरेको अफ्ठ्यारो मान्ने मेरो मन अलिकति हलका भयो । कतिपय बेला समिक्षा पनि साहित्य झैँ लाग्छ । शंकर लामिछानेले पारिजातका लागि लेखेझैँ । तर मैले यसपाली कवि श्यामलको समिक्षा नै नपढिकन कविता पढ्न चाहेँ । अरुबेला भन्दा पृथक अनुभूति मिलोस् र म पूर्वाग्रही नबनुँ भन्ने सोचले मात्र ।
‘चराहरूको विवेक’ बाट शुरुभएको कविताको श्रृङ्खला ‘मेरो अनुपस्थितिमा’ गएर टुगिंयो । ३७ वटा कविताहरू संग्रहित एउटा चिटिक्कको कविता सँग्रहलाई कविले आफ्नी आमालाई समर्पण गरेका रहेछन् । आमा र कवितासँग जोडिएका केही संवेदनाका टुक्राहरू मैले पनि संगालेर राखेको छु । कतिचोटी जोडेको छु कविता बनाएर कति भने जोडिन मानेका छैनन् ।
एकनासले उड्छन् । ”
(चराहरूको विवेक, पृष्ठ १)
पहिलो कविताको यो अंश प्रतिकात्मक छ । मानौँ कविता यो अंशमै पूर्ण छ । कविताले के भन्न खोजेको छ भन्ने थाहा पाउनलाई मैले यसभन्दा तलको कवितांशको सहायता लिइन ।
कवि भोजराजको दुविधाले घरिघरि कवितामा भनेको छ, बरु ढुँगाजस्तो मुटु नभएको जिन्दगी पो हो कि सजिलो ? किन अमिवा नै हुनु पर्छ र आकार बदल्न सक्नका लागि । अरुले नै बदलेपनि ढुँगा घरको गार्हाहरूमा चोइटिएको छ, मन्दीरका मूर्तिहरूमा कुँदिएको छ वा बगरमा ढुङ्गै भएर पल्टिएको छ । ढुङ्गा कमसेकम ढुंगा हुन छोडेको छैन । मुटु नभएर के भो ?
“ठक्कर दिनु हुँदैन ढुङ्गालाई
जुधाउन हुँदैन ढुङ्गालाई
तैपनि ढुङ्गाहरू कहिल्यै
आफैँ जुध्दैनन् ।”
(ढुङ्गा, पृष्ठ ८)
थाहा छैन कविले तलको कवितांशमा भने झैँ फुलहरूलाई उनीहरूकै शाश्वत नियम थाहा होला नहोला ! अथवा नझरी फूल फेरी फूल भएर फक्रिन सक्दैन भन्ने यथार्थवोध पनि शायद होला नहोला, तर यति थाहा छ, कविलाई फूलहरूप्रति सहानुभूति छ, एक प्रकारको कोमल सहानुभूति । तर कविलाई कतै भेटेँ भने सोध्न मनलागेको छ, फूलहरूले के साँच्चै निम्सरो हावाको झोक्कासँग हार्दै जानुमै सौभाग्य ठान्छन् ?
“फूलहरू हरेक दिन
र, उनीहरूसँगै समर्पित हुन्छन् ।
फूलहरू हरेक क्षण
र, उनीहरुकै तालमा नाच्छन्
फूलहरूलाई शाश्वत नियम थाहा छ
नझरी फेरि कसरी फुल्नु ?”
(फूलहरू, पृष्ठ १८)
कवि सचेत छन्, असुरक्षित सडकहरूका बारेमा, हिटलरको ग्याँस चेम्बरको आतंक अझै पनि उनको कानको छेवैबाट निस्किन्छ । उनीसँग पनि स—साना सपनाहरू होलान्, त्यसैले उनी सपनाहरूको संवेदनशिलतालाई, गाम्भिर्यतालाई स्पर्श गर्न लालायित छन् ।
“कहाँ छुट्यो गोल्डस्टार जुत्ता ?
सुदूर पहाडको एउटा कुनामा
कहिल्यै नफाटोस् भनेर
तुना कसेको थिएँ
खै, कहाँ छुट्यो ?
भिडन्तमा बलमे उछिट्टिएको
किन चाहियो जुत्ता ?
मिल्छ भने गुमेको थियो कसरी
सडकको किनारामा बस्दा
फर्काउने जवाफ त चाहियो नि !
(छुटेको जुत्ता, पृष्ठ ६८)
पुस्तकको आवरणमा प्रकाशित कविको तस्विरमा छालाका जुत्ता टल्किएका छन्, तर कविको मन बल्झिएको छ गोल्डस्टार जुत्तामा । हाम्रा जुत्ताहरू कति उछिट्टिए बमका छिर्का भएर, कति हराएका छन्, अरब, मलेशिया र कोरियातिर । कति जोर जुत्ताहरू त सदरमुकाम हिँड्दा हिँड्दै थाकेर भाडाको कोठामा भर्खरै फुकालिएका होलान् । किन पुरा हुन सकेन मेरो देशको गोल्ड स्टार सपना ? कसले देखायो सपना ? कसले तुवायो सपना ?
कविताहरू अझै बहुआयामिक बन्दै जाउन् । यो परदेशमा यति सुन्दर उपहारको माध्यमबाट पुरानो समय र सुन्दर कविताहरूसँगको निकटताकालागि आमन्त्रण गर्ने कवि भोजराज न्यौपानेलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई । शुरुवातमा भने झैँ तपाइँका जुत्तापनि कतै छुटे भने तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँको जीवनयात्रा जुत्तामै निर्भर अबश्य छैन । यात्रा कतै नछुटोस् । जीवनको पनि, कविताको पनि ।
प्रकाशक : शब्दहार क्रियशन्स
बितरक : प्राइम बुक्स प्रा. लि.
मूल्य रु : १५०
अन्य कृती / समीक्षाहरू
‘काठको बाकस’ खोलेर हेर्दा २०१६-०३-१५
मलाई मर्ने स्वतन्त्रता छ ! २०१५-०९-०२
कविताकै सौन्दर्य लिएर २०१५-०४-११
सायन जस्तै छ “भागेर भूगोलभरि” २०१५-०३-२२
भोजराजका एक जोर महंगा जुत्ता २०१५-०३-२२
नेपाली कविताको एउटा धागो २०१४-०७-०७
सबै कृती / समीक्षाहरू
अहिले सम्म "साताको साहित्य"लाई ८६८५८४ पटक पढिएको छ ।